Medusa, onye bu agwọ n'isi | Njem zuru oke
Medusa Ọ bụ otu n'ime ndị ama ama ama ama na akụkọ ifo Greek. Ọ bụ otu n'ime gorgons atọ ahụ, tinyere Stheno na Euryale, naanị otu n'ime ụmụnne nwanyị atọ dị egwu nke na-adịghị anwụ anwụ.
Ole ndị bụ gorgons ahụ? Mụ anụmanụ ndị a dị egwu ndị Gris oge ochie tụrụ ụjọ bụ ụmụ nwanyị nwere nku nwere kama ntutu n'isi-ha ha nwere agwọ di ndu. Otú ọ dị, nke a abụghị ụjọ ha kachasị atụ. Ihe kacha njọ bụ na, dị ka akụkọ si kwuo, ndị gbalịrị ileba anya na anya ha ghọrọ nkume ozugbo.
1 Ndị ozodimgba
Ọ dị mfe iche n'echiche egwu ndị ae kere eke ga-abụrịrị ndị sitere na ndị Gris nke oge ahụ, bụ ndị were akụkọ ifo ndị ochie niile nke ọma. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ ga-abụrịrị ihe na-emesi obi ike ịmara na gorgons biri n'ime ime obodo. Gbanye agwaetiti dị anya a na-akpọ Sarpedon, dị ka ọdịnala ụfọdụ si dị; ma ọ bụ, dị ka ndị ọzọ si kwuo, ebe furu efu n'ime Lybia (nke bụ ihe ndị Greek kpọrọ nke Afrika).
Ndị gorgons bụ ụmụ nwanyị Forcis na Keto, abụọ n’ime chi ndị gbara ọkpụrụkpụ dị n’ime mmụọ ọchịchị di egwu nke Gris.
Sistersmụnne nwanyị atọ ahụ (Stheno, Euryale na Medusa), natara aha górgonas, ya bụ, "egwu". E kwuru banyere ha na ọbara ya nwere ike ịkpọlite ​​ndị nwụrụ anwụ, dị ka ogologo oge ọ na-ewepụta si n'akụkụ aka nri. Kama nke ahụ, ọbara dị n'akụkụ aka ekpe nke gorgon bụ nsí na-egbu egbu.
Bust of Medusa sculpted Gian Lorenzo Bernini in 1640. Ebube Baroque a kpụrụ ọfụma na Capitoline Museums nke Rome.
Na-ekwu okwu nke Medusa, ekwesịrị ikwu na aha ya sitere n'okwu Grik oge ochie Μέδουσα nke ihe ọ pụtara bụ "onye nlekọta".
E nwere akụkọ mbubreyo nke na-ekwu na Medusa dị iche karịa gorgons abụọ ndị ọzọ. Dị ka nke a si kwuo, Medusa bụ nwa agbọghọ mara mma nke ga-enwe kpasuru chi nwanyị bụ́ Athena iwe na-emerụ otu ụlọ nsọ ndị edoro nye ya (dịka onye edemede Rome bụ Ovid si kwuo, ọ gaara eso chi nwee mmekọahụ Poseidon n'ime ebe nsọ). Nke a, nke siri ike ma na-enweghị ọmịiko, ga-enwe gbanwee ntutu ya ka ọ bụrụ agwọ ka ọ bụrụ ntaramahụhụ.
Akụkọ banyere Medusa emeela ọtụtụ n'ọtụtụ ọrụ nka site na Renaissance ruo narị afọ nke XNUMX. Ikekwe onye a kacha mara amara bụ ihe osise mmanụ site na Caravaggio, nke e sere na 1597, nke e gosiri na foto ahụ nke na-achị post ahụ. N'oge na-adịbeghị anya, ụfọdụ akụkụ nke ụmụ nwanyị ekwuola na ọnụ ọgụgụ Medusa dị ka akara nke nnupụisi nke ụmụ nwanyị.
Na akụkọ ifo ndị Greek aha Medusa nwere njikọ na - enweghị njikọ na nke Perseus, ogbu mmadu ma guzobere obodo Mycenae. Dike nke kwubiri ndu ya.
Danae, a na-azọrọ nne nke Perseus Polydectes, eze agwaetiti Seriphos. Agbanyeghị, nwa okorobịa ahụ guzo n'etiti ha. Polydectes chọtara ụzọ iji kpochapụ ihe mgbochi a site na iziga Perseus na ozi nke onye ọ bụla na-enweghị ike ịlaghachi na ndụ: gaa Sarpedon na bute isi Medusa, naanị gorgon na-anwụ anwụ.
Athena, onye nsogbu ka na-ewute Medusa, kpebiri inyere Perseus aka n'ịgbalị mgbagwoju anya ya. Ya mere, ọ dụrụ ya ọdụ ka ọ chọọ Hesperides ma nweta n'aka ha ngwa ọgụ dị mkpa iji merie gorgon. Ngwá agha ndị ahụ bụ mma agha na okpu agha nke o nyere mgbe o yikwasị ya ike nke adịghị ahụ anya. Ọ natara n'aka ha akpa nwere ike ịnwe isi Medusa n'enweghị nsogbu. Ihe bụ ihe ọzọ, Hermes gbazinyere Perseus ya Akpụkpọ ụkwụ nwere nku ife efe, ebe Athena n'onwe ya nyere ya nnukwu enyo na-egbu maramara.
Perseus na-ejide isi Medusa. Ihe eji akpụ akpụ selini, na Piazza de la Signoria na Florence.
N'ịbụ onye eji ụgbọ mmiri a dị ike, Perseus zutere izute gorgons. Dika ihu oma si di, o huru Medusa ka o na-ehi ura n’ime ohia ya. Iji zere anya ya nke ga - eme ka ụjọ jide gị, onye dike ji ota nke gosiputara onyinyo nke ozodimgba dika enyo. N'ụzọ dị otú a, ọ nwere ike ịga n'ihu ya na-enweghị ile ya anya n'ihu ma gbuputu ya isi. Site na olu agbaji amuru inyinya nwere nku Pegasus na ibu aha ya bu Chrysaor.
Mgbe ndị ọzọ gorgor chọtara ihe merenụ, ha gawa ịchụ onye gburu nwanne ha nwaanyị. Ọ bụ mgbe ahụ ka Perseus jiri okpu agha ya nke a na-apụghị ịhụ anya gbapụ n'aka ha na nchekwa.
Akara nke isi isi Medusa mara dị ka Gorgoneion, nke pụtara n'ọtụtụ nnọchi anya na ọta nke Athena. Ndị Gris oge ochie jiri ọtụmọkpọ na ihe ọkpụkpụ nke isi nke Medusa mee ka ọchichọ ọjọọ na anya ọjọọ ghara iru. Ugbua n'oge ndị Hellenist, Gorgoneion ghọrọ onyonyo a na-ewu ewu na mosaics, eserese, ọla na mkpụrụ ego.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Medusa, onye ji agwọ n’isi